Caqabado: Maxay yihiin Luqadaha Barnaamijka ugu fiican si ay u xoqaan bogga?
Webka xoqitaanka, oo loo yaqaano soo saarista xogta iyo goosashada webka, waa farsameyn ka mid ah soo saaridda xogta laga helo goobo kala duwan. Barnaamijka shabakada ee shabakada internetka ayaa laga helayaa internetka iyada oo loo marayo browserka webka ama iyada oo loo marayo Xawilaadda Xawilaadda Qalabka. Goobidda Webka waxaa sida caadiga ah la hirgeliyaa iyadoo la adeegsanayo gawaarida automated or crawlers web. Waxay ku socdaan bogag internet oo kala duwan, waxay ururiyaan xogta waxayna soo saaraan sida looga baahan yahay shuruudaha isticmaalaha. Mawduuca bogga shabakada waa la xakameynayaa, dib loo hagaajiyay, loona baadhay, halka xogta loo daabacay waraaqaha macaamiisha ah marka si dhamaystiran loogu shaqeeyo si waafaqsan tilmaamaha.
Bogga shabakadda waxaa lagu dhisay luuqadaha ku saleysan calaamadaha sida HTML, Python, iyo XHTML. Waxay ka kooban tahay macluumaadka hanti, waxaana loogu talagalay bini-aadanka, ma aha duubista webka bots. Si kastaba ha ahaatee, kala duwan qalabaynta waxay awoodaan inay akhriyaan boggaan sida bini'aadamka ah waxayna helaan macluumaad faa'iido leh qaababka CSV ama JSON.
Miyuu yahay Python luuqada ugu fiican ee cirifka ah?
Python waa asal ahaan barnaamij luqadeed oo bixiya "qolof" si loo xoqdo xogta qaab qoraal. Waxay ka caawisaa dadka isticmaala macluumaadka bogagga internetka ee kala duwan. Python waa mid faa'iido leh marka ganacsatada ama barnaamijyadeydu ay go'aansadaan in ay macluumaadka ku xoqaan gacanta. Luqaddan, waxaan si sahlan u geli karnaa xariiqda koodka oo fiiri sida xogta loo xoqay. Si kastaba ha ahaatee, Python maaha luqadda ugu fiican ee webka.
Python waxay leedahay boqolaal fursado waxtar leh oo loogu talagalay in lagu badbaadiyo waqtigeena. Tusaale ahaan, waxay caan ku tahay aqoonta cilmibaarista iyo cilmi-baarista xogta. Python waxay fududeyneysaa inaan raadino xogta iyo waraaqaha akadeemiyadda internetka. Laakiin marka ay timaado cidhibta webka, Python ma aha mid wax ku ool ah sida C ++ iyo PHP. Python waxaa ugu wanaagsan ee loogu talagalay taageerada la dhisay iyo kaydinta xogta qaababka caadiga ah sida JSON iyo CSV.
Luqadaha barnaamijka ugu wanaagsan ee loogu talagalay duuduubka webka:
Hadda waxay cadahay in Python uusan ahayn luqada ugu fiican ee webka. Taa baddalkeeda, tiro badan oo kombiyuutar iyo saynisyahanno waxay door bidaan C ++, Node. js, iyo PHP ka badan Python.
Way fiican tahay in la burburiyo oo la raadiyo goobo kala duwan. Node. js waa ku habboon yihiin boggaga internetka iyo taageerooyinka loo qaybiyey taranka internetka. Luqaddani waxay faa'iido u leedahay xogta laga tirtiro bogagga shabakadda aasaasiga ah iyo kuwa sare.
C ++ wuxuu bixiyaa waxqabad aad u fiican oo kharashkuna. Luqaddani way ka fiican tahay Python waxayna hubisaa natiijooyinka tayada. Si kastaba ha noqotee, laguma talineynin shirkadaha ayadoo ay ugu wacan tahay codsiyada adag.
PHP waa luuqadda ugu fiican ee webka. Si ka duwan Python iyo C ++, PHP ma abuurayso dhibaatooyin marka ay jadwalayaan hawlihii iyo waxyaabo ka soo baxa bogagga kala duwan. Waxay u egtahay guud ahaan wareegtada oo waxay qabataa mashaariicda ugu badan ee shabakada webka iyo mashaariicda wax soo saarka internetka. Soo dejinta. io iyo Kimono Labs waa laba qalab oo xoogan qalabka wax lagu qorayo oo ku salaysan PHP. Waxay leeyihiin muuqaalo weyn waxayna xoqin karaan tiro badan oo bogag leh shabakad saacad ama laba. Nasiib darro, Shinida iyo Qurxinta quruxda badan (oo ku salaysan Python) ma bixiyaan wax taageero ah sida qalabka saaridda xogta PHP-ku salaysan.
Hadda waxay cadahay in dhammaan luqadaha barnaamijyada ay leeyihiin faa'iidooyinkooda iyo faa'iidadooda. PHP, si kastaba ha ahaatee, wuu ka fiican yahay Python waana luuqadda ugu fiican ee webka. Waxay siisaa tas-hiilaad wanaagsan dadka isticmaala waxayna si fudud u maareyn kartaa mashaariicda ballaaran Source .